ISEBOX: Daabacaadda iyo Qaybinta Mawduuca Muuqaalka | Martech Zone
ISEBOX waxay u oggolaaneysaa wakaaladaha iyo noocyada inay maamushaan, daabacaan oo u qaybiyaan sawirrada, dukumintiyada, feylasha maqalka, koodhadhka gundhigga, iyo in ka badan oo dhan a hal bog. Bogga loogu talagay wuxuu noqon karaa mid sirta ilaaliya ama u furan dadweynaha. Faylasha fiidiyowga ee la soo galiyay waxay u weynaan karaan 5GB fayl kasta oo warbaahinta ayaa macmiilku ama HQ ku ciyaari karaa miis kasta ama qalab mobile ah iyada oo aan loo baahnayn soo dejin, ciyaaryahan, FTP login, iwm.
Macaamiisha ISEBOX waxay u adeegsadaan barxad hal bog ah oo loogu talagalay qulqulka shaqooyinka fiidiyowga, sii deynta dadweynaha ee warbaahinta badan, qalabka sumadda, warbixinnada caymiska gudaha iyo sida qalab wadaag hantiyeed gudaha ama maktabadda waxyaabaha ku jira.
ISEBOX Tilmaamaha Muhiimka ah ee Mawduuca iyo Daabacaadda waxaa ka mid ah:
Dhammaan Mawduucyada, Hal Meel - U soo rar sawirrada, fiidiyowga, maqalka iyo dukumintiyada nooc kasta oo ay yihiin ISEBOX oo la wadaag kooxdaada, macaamiishaada, saxafiyiinta, iyo warbaahinta. Wax walba waa la daawan karaa isla markaana lagu soo dejin karaa isla goobta. Hal URL ayaa wax walba ku wada geeya hal meel.
HD baahinta Video Qaybinta iyo Wadaagista - U faafi faylasha fiidiyowga ah illaa tayada HD - xirmooyinka la saxarray ama waxyaabaha ku duuban. Faylashaada fiidiyowga oo buuxa waa la soo dejisan karaa, sidoo kale si toos ah ayaa loo abuuray qaabab MP4 iyo FLV oo hooseeya. Mar dambe looma beddeli doono oo faylka loo xallin karin arrimaha.
Faylal Ballaaran oo Waaweyn - Adoo adeegsanaya ISEBOX qaab-dhismeedka weyn ee Faylka Faylka ah, soo deji oo wadaag faylasha hal ilaa 5GB cabir ah adigoon ku khaldin FTP iyo logins ka murugsan. Taas kuma sameyn kartid emaylka, WeTransfer ama YouSendIt. Oo waad gali kartaa faylal badan intaad jeceshahay.
Soo Degso oo Cudarada Raadinta - ISEBOX waxay si dhab ah ula socotaa cidda soo dejineysa waxyaabahaaga - iyagoo siinaya magacyadooda, emaylkooda, loo-shaqeeyaha, cinwaanka, iyo in ka sii badan - dhammaantoodna waxay ku jiraan warbixin hagaagsan oo ku saabsan shaashaddaada. ISEBOX sidoo kale waxay kuu sheegi doontaa fiidiyowyada URL-yada lagu duubay, iyo sida ay u shaqeynayaan.
Warbixinno iyo Falanqeyn - Ku cabir waxtarka ISEBOX Warbixinnada iyo Falanqaynta. Ogow inta jeer ee la soo dejinayo iyo cidda la soo bandhigayo, aragtiyada bogga, tixraaca taraafikada, waxyaabaha ugu caansan, iyo saameynta warbaahinta bulshada (saamiyada, Jecel, Tweets, iwm). Kuweena Analytics mishiinku wuxuu ku siin doonaa macluumaad ka badan kan Google - adigaa iska leh xogta, ee maahan iyaga. Haddii aad rabto inaad ku xirto Aqoonsigaaga Google Analytics ID-gaaga laba jeer, waad sameyn kartaa taas sidoo kale.
Dashboard wada shaqeyn ah wuxuu kuu ogolaanayaa adiga iyo kooxdaada inaad si wada jir ah u wada shaqeysaan, oo leh heerar ogolaansho oo kaladuwan, oo ku saabsan nuxurka iyo warbixinnada. Haddii aad la shaqeyneyso macaamiisha, waxaad iyaga siin kartaa dashboard u gaar ah sidoo kale, kuu oggolaanaya inaad ka wada shaqeyso dhammaantood.
mobile - Wax walba waxaa lagu qoraa HTML5 si loo hubiyo is waafajinta dhammaan aaladaha mobilada - Android, iPhone, iPad, Blackberry, iyo in ka badan. Dhammaan fiidiyowyada, sawirrada, maqalka, iyo dukumintiyada waa la arki karaa iyada oo aan loo eegin waxa aad soo dejiso, iyo qalabka ama biraawsarka loo adeegsado.
Si Buuxda Loogu Sameyn Karo - Bogagga nuxurka leh ee 'ISEBOX' waxaa loo calaamadeyn karaa astaantaada, ama magaca macaamiishaada haddii aad tahay hay'ad. Wax walba oo laga soo xusho xarfaha kala duwan, astaanta, midabada RGB / Hex, sawirka asalka iyo inbadan.
Qaybinta E-maylka - U soo rar liistadaada qaybinta ISEBOX, ka dibna jadwal ama dir ISKUXX DIIDAN. Kani waa emayl saaxiibtinimo nooc isku mid ah oo ah bogga 'ISEBOX' ee aan ku dhammaanaynin faylalka spam, lagu calaamadeeyo sida waraaqda qashinka, ama ku xir sanduuqyada leh lifaaqyo culus. Waxay xitaa ka ciyaari doontaa fiidiyowga saxda ah cinwaanka emaylka markii la taageerayo.
Lambarka Badbaadinta - Diyaar uma ahan dunidu inay aragto waxa ku jira? Fure hal-riix ah ku ilaali bog kasta oo 'ISEBOX' iyo waxa ku jira. Ku habboon warbaahinta / saxafiga gaarka loo leeyahay, isgaarsiinta gudaha ee fudud, ama habraaca oggolaanshaha macmiilka.
Luuqado Badan - Ku daabac boggagaaga 'ISEBOX' waxyaabaha aad ka kooban tahay oo ka mid ah luqado badan oo ay ka mid yihiin: Ingiriis, Faransiis, Isbaanish, Jarmal, Talyaani, Shiinee, Boortaqiis, iyo Czech iyadoo luuqado badan lagu kordhin doono bilaha soo socda.
Isgaarsiinta Bulshada - frontend waxaa loogu talagalay inay shaqeyso oo u ekaato mid siman sida barnaamijyada bulshada ee aan isticmaalno maalin kasta. ISEBOX sidoo kale waxay ku siineysaa ikhtiyaarka ah inaad awood u siiso hal-gujin galitaanka bulshada ee isticmaalayaasha si ay u soo dejistaan ​​waxyaabaha. Isku xirnaanta Fudud ee Wadaagista Bulshada ayaa lagu rusheeyaa ISEBOX oo dhan, sidoo kale.
Tags: emaildaabacaadda dhacdoiseboxSuuqgeynta Mobilada iyo MashiinkaMedia Social Suuq
Postacumen: Falanqaynta Tartan ee Bogagga Facebook